”Way wada gooyeen!” – Dalal waawayn oo reer Yurub ah oo qaaday tillaabo ka dhan ah Maraykanka oo hiillo u ah Muslimiinta | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Way wada gooyeen!” – Dalal waawayn oo reer Yurub ah oo qaaday...
”Way wada gooyeen!” – Dalal waawayn oo reer Yurub ah oo qaaday tillaabo ka dhan ah Maraykanka oo hiillo u ah Muslimiinta
(Quddus) 14 Luulyo 2021 – Danjirataasha Jarmanka iyo Faransiiska iyo dhowr kale oo ka socda dalal Midowga Yurub ah (EU), ayaa u gooyey munaasabad ay Safaaradda Maraykanku ku qabatay magaalada la haysto ee Quddus, sida hadda lagu faafiyey warqaadka Israeli-ga ah ee Ynet News.
Xafladdan ayaa Safaaradda Maraykanka oo beri dhowayd Quddus u guurtey waxay qabatay 4tii Luulyo, si loogu maamuuso Maalinta Xorriyadda Maraykanka.
Safaaradda ayaana casuuntey Danjirayaasha iyo howlwadeennada Safaaradaha caalamiga ah ee wakiillada ku leh Israel, sida uu qoray, according to Ynet News.
Ynet News ayaa intaaraaciyey in Danjirayaasha EU ay go’aansadeen inay xafladda u gooyaan maadaama ay ku taallo meel aan la isku wada raacsanayn oo ah Quddus, taasoo ay gaar ahaan aad u diiddan yihiin inta badan dalalka Muslimku.
Waxaa sidoo kale jira dalal badan oo reer Galbeed ah oo aan Quddus u aqoonsanayn caasimadda Israel, balse u haysta magaalo la haysto.
The German and French ambassadors, along with other European Union (EU) ambassadors, boycotted a ceremony at the US Embassy in Jerusalem, Israeli Ynet News has revealed. pic.twitter.com/ov8ZjUUyA2
Dalalka ay Danjirayaasheedu gooyeen waxaa ka mid ah Jarmanka, Faransiiska, Romania, UK, Kosovo, Australia, Norway, iyo Canada oo iyadu ka tirsan Woqooyiga Ameerika.
Arrintan ayaa weji gabax ku noqotay maamulka cusub ee Maraykanka ee Joe Biden oo doonaya inuu wanaajiyo xiriirka EU, kaasoo aad u xumaaday xilligii Trump oo ah ninka Safaaradda Quddus geeyey.
Previous articleSaameynta Ethiopia ay ku leedahay siyaasadda dalka Soomaaliya 2000 ilaa 2021
Next articleShirkadaha dayuuradaha Imaaraadka oo ay jug xumi kasoo gaartey cudurka Covid-19 (Qandaraas la baabi’iyey)